Nabadda iyada oo loo marayo horumarka II (PDevII) - Equal Access International
Waad ku mahadsan tahay EAI, bulshooyinkeenii ayaa dib u midoobay, waanan u dulqaad badanahay midba midka kale - xitaa dadka tuulada ayaa saameyn ku yeeshay; sidoo kale tayada idaacadayada si muuqata ayaa u muuqata inay soo hagaagtay, sidoo kale dhagaystayaashu way soo fiicnaadeen. ”
Dhisida guusha PDev I, EAI waxaa loo xushay lammaane isbahaysi muhiim ah USAID's, Peace marayo barnaamijka horumarinta (PDev II) intii u dhaxeysay 2011 iyo 2016 wadamada Burkina Faso, Chad, iyo Niger. EAI waxay cabirtay oo ku dhisatay isgaarsiinta asalka ah ee barnaamijyada isbedelka bulshada oo si aad ah ugu guuleystey PDev I waxayna ballaarisey gaaritaanka aan ku jirno Chad. EAI waxay shaqaalaysiisay qalabkeedii buuxa si ay u hubiso in PDev II ay ahayd mid ku guuleysata isku xirnaanta qorshaynta jiritaanka, kaqeybgalka bulshada, wareegyada raadiyaha; saxafiga, wariye bulshada, iyo tabobare cilmi baaris, iyo sidoo kale tabobaraha fududeynta LDAG iyo ugu dambeyntiina awood milatari oo muhiim ah, maareynta idaacada, iyo tababarka wax soo saarka.
Sida PDev 1, EAI waxay soo saartey seddex nooc oo barnaamijyo raadiye ah wadan walba, oo ay kujiraan barnaamijyada dhalinyarada, barnaamijyada maamul wanaaga, iyo barnaamijyada CVE. Si loo hubiyo in bulshooyinka xiisaha leh ay marin u lahaan karaan barnaamijka barnaamijka, EAI ayaa maaddadan u turjumay sagaal luqadood oo maxalli iyo gobol ah.
Barnaamijyadan raadiyaha waxaa lagu qiyaasey inay gaareen oo ay dhageysteen in ka badan 17 milyan oo qof oo ka kala yimid dhammaan saddexda dal.
Qaabka Jawaab-celinta Isdhaxgalka: EAI waxay ku dartay teknolojiyada mobilada mashruuca. Kooxahani waxay la shaqeeyeen aalado mobilada ah sida Qadka hore, Nidaam maarayn olole SMS ah oo loo sameeyay si qaas ah si loogu isticmaalo faa iidooyin la'aan si loogu daro ololeyaasha SMS barnaamijyada raadiyaha iyo howlaha mashruuca. Isticmaalidda softiweerkan furan wuxuu awood u yeeshay in aan ku darno is-dhexgal wax ku ool ah oo u oggolaanaya dhagaystayaasha in ay u diraan su'aalo, faallooyin ama codsiyo farriin qoraal ah (SMS). Intaa waxaa sii dheer, EAI waxay bilowday nidaamka isku-dhafan ee jawaab-celinta codka (IVR), kaas oo awood u siiyay jawaab-celin aan la garanayn, sahanno, iyo xog-ururin iyo sidoo kale jawaab-celin muhiim ah oo ku saabsan barnaamijyada aan u adeegsan jirnay isla markaana aan ula qabsan lahayn si aan ugu adeegno dhagaystayaasheena oo aan ula kulanno yoolkayaga.
Khariidadda Raadinta iyo Taageerada Saldhigga FM: Si loo go'aamiyo tirooyinka saxda ah ee gaarsiinta idaacadaha rafiiqa wadaagga ah, EAI wuxuu booqday in ka badan 60 saldhig oo ku yaal waddamada PDEVII, isaga oo soo aruurinaya macluumaad farsamo oo ay ka mid yihiin meelaha sare ee anteenooyinka, awoodda gudbiyaasha, iyo isku-duwayaasha GPS ee saldhigyada. Xogtan awgeed, kooxdeenna waxay ku guuleysteen inay xisaabiyaan caynsanaanta juquraafi ahaaneed iyo qiyaastii dhagaystayaasha inay gaarayaan xarun kasta. Markii ugu horeysay, tani waxay siisay idaacadaha maxalliga ah dareen ah halka ay ku sugan yihiin aqoontani waxay u saamaxday inay xoogga saaraan agabyadooda xaddidan qaabab badan oo la beegsaday.
"Fikradayda, kor u qaadista wacyiga [VE] ee dhallinta waa 'qof aan maskax lahayn' waana mid faa iido badan leh, maxaa yeelay waxay u oggolaanaysaa dhalinyarada inay ku dhexjiraan siyaasada oo ay difaacaan xuquuqdooda."
Awoodda Saxaafadda Dhisidda iyo Tababarka:
Ka sokow bixinta tayo sare leh, luqadda maxalliga ah ee CVE oo loogu talagalay dhagaystayaasha guud ahaan gobolka, PDev II ee SO2 waxay kaloo dooneysay inay xoojiso warbaahinta maxalliga ah, si ay u abuurto ilo waara oo macluumaad iyo aagag dood si furan loogu doodo. Dhamaadka mashruuca, PDev II wuxuu la shaqeynayay 14 raadiye rafiiq oo ku yaal Burkina Faso, 19 ku yaal Chad, iyo 40 Niger ah. Labadii sano ee ugu horreysay, tababarka ay idaacadaha ku qaateen ayaa inta badan ka kooban xirfado farsamo oo aasaasi ah iyo kobcinta waxyaabaha ka kooban soo gudbinta iyo soosaarka idaacadda iyo sidoo kale casriyeynta aaladda idaacadda iyo xoojinta kaabayaasha si loo soo saaro waxyaabo tayo sare leh.
Sannadkii saddexaad iyo afaraad, tababarku wuxuu noqonayaa mid aad u horumarsan oo ay ku jiraan mowduucyo gaar ah sida abuurista noocyo gaar ah oo barnaamijyo ah, tusaale ahaan, soo wicitaanno toos ah, riwaayad, rakibaadda nidaamka jawaab-celinta SMS - taa waxaa sii dheer, joogtaynta iyo tababarka tababbarka maareeyayaasha xarumaha iyo maamulka. xubnaha guddiga ayaa la fuliyay.
U dejinta Jaaliyadaha sidii loo waari lahaa: Qaabka EAI ee udub dhexaadka u ah bulshada wuxuu udub dhexaad u yahay dhisida awooda kooxaha maxalliga ah iyadoo ujeedadu tahay dhiirrigelinta wax soo saarka socda iyo waxqabadka ka dib dhammaadka mashruuca. Si tan loogu sameeyo PDev II, waxaan bixinay deeqo dakhli-abuur ah oo loogu talagalay xulashada saldhigyada waxqabadka sare ee saldhigyada tilmaamaha si ay istiraatiijiyadooda waara u galiyaan imtixaanka. Waxaan ka hirgelinay barnaamijyo hagitaan raadiye halkaasoo xarumo tayo leh ay ku marti galiyeen soosaarayaasha internerka iyo farsamoyaqaano ka socda saldhigyo waxqabad hooseeya dhowr isbuuc oo wehelnimo ah, waxaana ku xigay booqasho iyo tababar goobta ah oo laga qabtay saldhiga mentee.
Ugu dambeyntiina, Dhisidda shabakadaha xirfadlayaasha ah ee suxufiyiinta ayaa laga bilaabay tababaro hore, sanadka ugu dambeeya ee mashruuca, tababarka waxaa lagu bedelay shirar Goobaha Idaacadda. Ka mideeya shaqaalaha seddex ama afar raadiye oo ku sugan aag juqraafi gaar ah, Wareegyadu waxay u dhaqmeen sidii warbaahin goboleed madaxbanaan oo waari kara. Intii lagu guda jiray kulamada Goobaabinta, shaqaalaha raadiyaha waxaa lagu casuumay inay midba midka kale isku halleeyo khibrad, latalin, iyo waxqabadka ugu wanaagsan, iyo in la soo saaro oo la is weydaarsado waxyaabaha ku saabsan luuqadda maxalliga ah mowduucyada ku habboon gobolka ee laga baahin karo idaacadaha badan. Dhamaadka mashruuca, saldhigyada waxaa lasiiyay buug-gacmeed dhammaystiran oo ku qoran (Faransiis, Ingiriis ama Carabi sida ku habboon) ee sharraxaya barnaamiyada ugu waaweyn ee habka EA ee soo-saarkii idaacadda, si loogu adeego tixraac ka dambeeya dhammaadka mashruuca.
Inta mashruucu socdo:
40 tabobar wax soo saar idaad ayaa la qabtay iyagoo gaaraya ilaa 600 oo raadiye, oo ay ku jiraan 17% dumarka
15 Wariyaha Bulshada, Saxafi, iyo Tababarida Xog uruurinta Sahanku wuxuu dhacay 247 qof, 25% haween ah
6 Tababarka Fududeeyaha LDG wuxuu qaatay tababbar 84 qof ah, 24% dumarka ah
Ugu dambeyntiina, waxaa isla markiiba la hirgeliyey ka dib PDev II, kaas oo ku lug lahaa rakibidda laba koronto oo qorraxda laga dhisayo iyo in laga dhiso laba taaro oo gudaha Chad ah si loo hubiyo cimri dherer. Wax ka baro mashruucaas halkan.
Xitaa marka ay jiraan dad isku khilaafsan, dhageysiga dhacdooyinkaaga waxay naga caawineysaa inaan dib u heshiisiinno dadkan aan is-af-galeyno. ”- Fariin IVR ah oo ka socota Matine Shaho, Tessaoua, Niger
Xaaladda nabadgelyo ee kacsan ee ka jirta wadamada PDevII ayaa tijaabisay warbaahinta PDevII dhowr jeer inta lagu gudajiray mashruucan, taasoo ku kalifaysa kooxaha warbaahinta inay si deg deg ah wax uga qabtaan isbeddelada siyaasadeed iyo kor u qaadida saameynta CVE.
Intii lagu gudajiray afgambigii dhicisoobay ee Burkino Faso 2014, dhagaystayaal aad u tiro badan ayaa soo xigtay idaacada PDevII oo gacan ka gaysatay dadaalka ilaalinta nabada ee bulshadooda. Markii ay la kulmeen qalalaasaha iyo rabshadaha ka dhanka ah dowladda ee dhacay intii uu socday afgembiga, beertaha Ouahigouya Ibrahim Touré wuxuu soo uruuriyay koox ka kooban 15 dhageystayaasha idaacadda PDevII ee aaminka ah si ay nabad ugu soo celiyaan bulshadooda una ilaaliyaan qoyska siyaasi caan ah oo maxalli ah.
“Markii dadweynihii careysnaa ay yimaadeen guriga siyaasiga waan ka hortagnay oo waxaan bilownay inaan ku baaqno cafis. Waan dhexdhexaadinay oo waanu baryinay, aakhirkiina qaar baa ka xumaaday dhaqankooda iyaga oo dhulka nagu tuuray hortayada; qaar kalena way noo mahadceliyeen oo way baxeen iyagoon waxba taaban ama jabin. Waan ka nasanay waana ku faraxsanahay in nala isticmaalay, laakiin waa in si daacad ah loo dhaho waxay ku mahadsantahay PDevII recognize waxaan garowsanahay in barnaamijkaan uu na baray anagoon xitaa ogaanin. Waxay nagu beertay ruuxii saamaxa iyo dulqaadka. ”
Idaacadda iyo Bulshada
Barnaamijyada raadiyaha asalka ah ee dhalinyarada iyo maamul wanaaga ee todoba degmo iyo laba degmo
Waxaa la sheegay inay u maleeyeen in barnaamijyada raadiyaha CVE ay yihiin kuwo la aamini karo oo rafcaan ah
Qiyaasta gaarsiinta dhagaystayaasha raadiyeyaasha, oo si joogto ah toddobaadle u dhageysta dhageysteyaal gaaraya 3.5 milyan
Dhageyso Raadiyaha Gwadaben Matasa (Dhallinta Boulevard) ee laga soo direy Niger, oo ay duubtay oo tarjumay luqadda Ingiriisiga ee kooxdeena raadiye ee dalka.
Dhageyso mid ka mid ah raadiyaha Chabab Al Haye (Dhallinta Alive) ee ka baxa Chad, oo lagu tarjumay Ingiriis
in loo sameeyo jaaliyado waara.